Biyo baxa deg dega ah - Wikipedia
Biyo baxa deg dega ah
Biyo-baxa deg-dega ah: daawo ma leeyahey?
Waa maxey biyabaxa deg-dega ah?
Mudooyinkii u dambeeyay waxaa soo batay cabashada mowduucan, dadyow farabadan oo dhibaatadan heysato ayaa ka dalbadey qorayaasha soomaaliyeed ee ka faalooda arimaha bulshada (Social Issues) iney waxka qoraan aragtidan; mushkiladan oo culeyskeeda iyo saameynta weyn leh ayaan u istaagey inaan bal wax uun aan ka diyaariyo si tusaale iyo horudhac ugu noqoto qoraalo farabadan oo laga sameyndoono aragtidan.
Biyo-bax degdeg ah ama waxa loo yaqaano caafimaad ahaan "Premature Ejaculation" loona soo gaabiyo "PE" waa xaalad ragga uu ku biyo-baxo muddo labo daqiiqo gudahood ah ama waxka yar, sida ku cad halbeega caafimaadka (Health Standard), sidoo kalena, dumarkuna way yeelan karaan cudurkan, laakiin aad uma badna. Ragga badankood waxay la kulmaan xaaladaan ugu yaraan hal mar noloshooda, waxay kaloo daraasad la sameeyay sheegtay isku celcelis muddada ay ragga ku biyo-baxaan inay tahay 5 ilaa 6 daqiiqadood sida caadiga ah (Normal Ogasm) Waxaa kaloo jira qeexid kale oo oranaysa “hadduu ninka biyo-baxo iyadoo weli xaaskiisa dhamaysan inuu qabo "PE"”. Howsha galmada waxay u baahantahay inuu jiro Rabitaan (Lipido), Kacsi (Arousal) iyo Biyo-bax (Orgasm), haddii saddexdaas mid la waayo hawlgab ayaa jiro.
Biyo-baxa waxaa loo kala qeybiyaa labo marxaladood oo kale ah: Wejiga saarista biyaha (Emission) oo ah illaa ay ka soo gaarto ibta. Wejiga gamista biyaha (Expulsion) oo ah wixii ka dambeeyo xaaladda kor ku xusan. Biyo-baxa degdegga ah haddii qofku isku arko isagoo awal fiicnaa waxaa loo yaqaanna "Secondary PE" laakiin haddii uu qabay inta uu ka qaangaaray waxaa loo yaqaannaa "Primary PE" waxayna ku kala duwanaanayaan daaweynta.
Waxaa la aaminsanyahay in sababaha keena PE-da ay yihiin badanaa dhibaatooyin nafsaani ah oo ay ka mid tahay niyad-jabka, welwelka, cabsida iyo waxyaabo kale. Waxaa kaloo keeni kara dhibaato maskaxeed, isbedel heerka hormoonada (Hormones change), dhibaatooyinka prostaytka, cudurro dhaxal ah iyo daawooyinka qaar. Si loo ogaado waxa keenay dhibaatadaan waxa loo baahanyahay in qofka laga qaado warbixin buuxda oo taabanayso qeybaha noloshiisa sidaa awgeed, waxaa habboon in aad u tagto dhakhtar.
Sababaha Keena Biyo Baxa Deg Dega ah ee Raga (Raga ugaar ah)
Waxaa xaqiiqo ah in waxkasta oo ku dhaca aadanaha, ay leeyihiin waxyaalo sababa, iyo habab waxyaalahaas loo daaweynkaro, hadaba dhibaatan oo ku baaheysa dhalinyarta adduunka, ayaan doorbidey inaan dhowr qodob ka qoro sababaha keena biyabaxa deg-dega ah, waxa jira inbadan dhalin yaro kacabanaya biyo baxa dhow ee ku imaada wakhtiga galmada aylasamaynayaan lamaanahooda taasina maaha mid intabadan dumarka jeclaystaan inay ninkooda durba biyadhaco. waxana sababtaasi keenta inay dumarka oo aysan waligarin gariirka macaan ee baahida tirta aybiyaha ka imadaan raga,waxana hubaal ah in raga badan kooda xiligaasi aysan siisamayn karin wax galmo ah marhadii biyaha ka imadaan, hadaba waxyaalaha uug waaweyn ee keena waxaa kamid ah :
	Qodobka hore: Dhibaato nafsiyan ah (Psychological factors) (Personal problems), qofka oo shaqo badan haya maalintii oo dhan kadibna markuu guriyaga usoo hoyotago uusan soo dhoweyn fiican ka helin xaaskiisa, kadib waxaa imaaneysa inuu kalsooni darro nafsiyaadeed ay ku dhacdo, xaaskiisana uu san dareen gaara siininba (Sexual feeling), qofka oo marka uu sameynayo galmada dareema iskubuuq farobadan (Excessive nervousness owing to sex), soojeedka habeenkii oo isaguna kamida waxyaalaha keena, iyadoo loo baahanyahey inuu qofku yareeyo soojeedka farahabadan, si nafsadu, iyo jidhku u helo wakhti ku filan oo ay arimahooda ku fulinkaraan, kuna nasankaraan.
	Qodobka kuxigga: Qofka oo ay lasoo darsaan dhaawacyo iyo xanuuno farabadan oo dhinaca jidhka ah, kuwaasoo ay kamid yihiin: qanjidh-xanuunka (thyroid gland), xiniinta oo xanuusata ama xanuun uu ku dhaco (prostate infective diseases), iyo isbedelka ku yimaada maskaxda, oo qeybweyn ka ah biya-baxa, tusaale ahaan, adigoo ka fikiriya waxyaalo kale oo aad samayso ama mashquul badan galiya maskaxda, waa hubaal in dhibaatadan ay imaan-karto.
	Qodobka kuxigga: Sigaarku wuxuu kamid yahey qodobada uugu waaweyn oo aad iyo aad u sababa aragtidan culeyskeeda leh, wuxuu sababaa in unugyada dhiiga qaada ay aad iyo aad u yaraadaan, islamarkaana yeelan kariwaayaan awood ay ku xajiyaan biyaha, waana sabab culus, oo dareenkeeda wadata (our cells become smaller due to smoking), wuxuu kala sababaa in wareega dhiigu noqdo mid ciriiri ku jiro, oo uusan sifiican dhiigu jidhka uugu wareegi Karin (poor blood circulation).
	Qodobka ku xigga: Qaadku wuxuu isaguna sababaa arintan, waxaa laga yaabaa in dab badan ay la yaabaan, waxa qaadka loogu sababaynkaro inuu arintan cilaaqaad iyo xiriir la leeyahey; waxeynu ognahey inuu qaadku kamid yahey waxyaabaha badan ee dhibaatada weyn ku haya caafimaadka qofka/dadweynaha, waxaana ku jira maadooyin badan oo mukhaadaraad ah oo ay kamid yihin (drug additctive), qofku markuu qaadka cuno, inuu leeyahey awood farabadan oo uugu galmoon karo xaaskiisa (high copulation drive), laakiin in kayar saddex daqiiyo ama labo daqiiqo ayuu ku biya-baxayaa, iyadoo ay uugu wacantahey jidhka oo aad iyo aad u daalan, maskaxda oo mashquul farabadan uu ku jiro, nafsada oo ciriir maxkaxeed ku jirta, isagoo ah qof ay hurdo heyso: waxyaalahaas oo dhan waxaa uugu wacan daroogada ku jirta qaadka oo saameyn wayn ku leh maskaxda iyo jidhka aadanaha (physical and mentally problem) qofkuna uusan awoodin inuu marlabaad ku laabto ciyaarta xaaskiisa.
	Qodobka ku xigga: Siigada, waa qodobka ugu weyn uguna muhiimsan marka aynu ka hadleyno sababaha ugu wacan ee biya-baxa deg-degga ah keena, inbadan dhalinyarta soomaaliyeed iyo kuwa caalamka, waxey sameeyaan siigada (masturbation) oo dhakhaatiirta adduunku isku raacsanyihiin inuu yahey sababta ugu weyn ee jilciya geedka ninka, sababana inuu biyo baxo waxkayar labo daqiiqo ama hal daqiiqo (early discharge). Guurka oo ah shey aad iyo aad u fiican oo qaaliya, daawana u ah mushkilaad farabadan oo aadanaha soo wajahdo, ayeysan dhalinyaro farabadan awoodin iney guursadaan, hamigooduna uu aad u sareeyo, hadaba siigada waxey u arkaan dariiq sahlan oo ay ku helikaraan raaxo gaaban oo mushkilad culus daaweynsa, waxeyna sababtaa sideed cudur oo waaweyn, oo ay kamid yihii; maskaxda oo yaraata, fahanka oo fogaada, awood daro nafsiyadeed iyo mid jidhba, nafaqo-daro, iyo waxyaalo kale oo badan. Dhalinyarta ka cabata biyo-baxa deg-dega ah 50% waxey yihiin dhalinyaro isticmaasha gacmahooda si ay u helaan raaxo gaaban laakiin saameyn weyn oo diidma ah wadata.
	Qodobka kuxigga: Daawashada filimaanta xun-xun ee kabaxsan anshaxa iyo akhlaaqiyaadka diinta iyo dhaqanka (blue movies), waxey saameyn wayn ku leeyihiin biya-baxa deg-dega ah, maxaa yeelay waxey had iyo jeer mashquul ka dhigtaa maskaxda, oo noqota mid ku fakeraysa sidii galmo u sameyn lahey, maskaxduna jawaab ayey ku maqantahey, inbadan dhiigyada iyo unugyada ayaa dhaawac weyn ku yimaada, waxeyna ugu dambeyntii sababtaa inuu qofku heynkari waayo biyaha, isagoo ujeedana aykasoo boodaan, dhakaatiirka caalamka ayaa isku raacey daawashada filimaanta xun (bad sex movies/blue movies) iney yareeyaan dareenka shahwada iyo raganimadaba.
	Qodobka kuxigga: Cudurka baabasiirka oo ah cudur khatar ah , ahna cudurka ugu horeeya ee sababa biya-baxa deg-dega, ayaa ugu badan asbaabaha loo cuskado iney ka dambeeyaan biya-baxa deg dega ah, iyadoo wlaiba la socdaan tabar yari xagga raganimada ah, boqoliikba 80 ayuu sababaa baabasiirku biya-baxa deg-dega ah xilliga galmada.
	Qodobka kuxigga: Cudurka sonkorowga ayaa isaguna ah sababaha keena biya-baxa deg-dega ah, dhakaatiir farabadan oo isugu jira Afrikaan, Carab, iyo Aasiyaan, oo ku sameeyay cilmi-baaris gaar ah cudurkan sonkorowga, ayaa si weyn u xaqiiqijiyey in uu leeyahey awood muuqata oo jidhku uusan ku xakameynkarin una laheyn awood xajimeed, oo uu biyaha ku xajin-karo.
	Qodobka kuxiiga: Xanuunada qaar sida Infections, qaarkood iyo xanuuunada kalyaha ku dhaca ayaa iyaguna sababikara biya baxa deg-dega ah, bixinta mid kamid ah xiniinyaha ragga, ayaana sidoo kale sababi kara xanuunkaas,
Maxaa dhibaato ka iman karta
Akhriste, waxaan u maleynayaa inaad hadda ka heysato fikrad balaaran mowduucan, hadaba waxaan isku dayeynaa ama aynu is weydiineynaa biya baxa deg-dega ah rag iyo dumarba dhibaato maku keeni karaa habsami socodka shaqadooda maalmeed iyo mustaqbalkooda nololeed, su’aahan oo inbadan muran ka taagnaa ayaan dhowaan laysku raacey in jawaabteedu ay tahey HAAAAAAAA!.
Way adagtahey in dhalinyarta mowduucan ka cabanaya ay tagaan cusbitaalada, ama ay la kulmaan culimada aqoonta durugsan u leh cudurkan, waxeyna inbadan ku andacoodaan in laga fiicanyahey in cusbitaal ama dhakhtar loogu tago sababtan, laakiin sanawaadkii dambe dhalinyartu way ku dhiiradeen iney tagaan cusbitaalada, lana kulmaan dhakhaatiirta cudurkan aqoonta fiicna u leh, dad badan ayaa ka aaminsan inuusan daawo laheyn, ama ka hadalkiisu inuu ceeb iyo wax laga xishoodo yahey!!!, taasina waxey u muuqataa in hadda dhalinyartu ka tanaasuleen.
Waxaa marag madoonto ah, in xilliga galmada la sameynayo ay ku keenayso qofka cudurkan qaba dareen nafsiyadeed oo kulul oo walbahaar, karaahiyeysi, naceyb, kalsooni darro, iyo rajo la’aan ay ku dheehantahey, iyadoo dhalinyaro farabadan iyagoo awoodi kara sameynta gur/guur iney iskaga daayaan sababtaas owgeed, maadaama ay kalsooni daro iyo rajox-xumo ay ku beerantahey.
Dhalinyaro farabadan oo xaas leh, ayaa anfariir ka qaada iney la kulmaan xaasaskooda iyagoo kalsooni xumo iyo walbahaar nafsiyadeed qaba, iyagoo marmarka qaarkood xaasaskodoa ku fura, ama dhibaato uugu geysta sida dil, iyo cadaadis nafsiyadeedba. Hadaba walaalyaal waxaad ogaataan in cudurkan daaweyntiisu ay fududahay kana mid yahey cudurada sida fiican la iskaga daweynkaro.
Daawo ma leeyahey?
Inagoo soo gaadhney nuxurkii maqaalkeena, Ilaahey ayaa balan-qaadey in cudur walba oo dunida yaala uu daawo leeyahey, marar badan ayaa laga yaabaa in daawadu ay daahdo, marmarka qaarkoodna way soo dag-dagtaa daawadu, hadaba cudurkan daawo ma leeyahey, jawaabtu waa HAAA.
Dhaliyaro farabadan oo aaminsan inuu daawo laheyn cudurkan, ayaan uugu bishaareynayaa inuu daawo fiican leeyahey, waase hadii waanada dhakhtarka, daawada, iyo wakhtiga sifiican oo haboon leysku waafajiyo, siwanaagsana loo qaato daawada, ma jiro cudur aan daawo lahey, mana jiro daawo aan dabiib/dhakhtar laheyn, mana jiro caafimaad aan wakhti laheyn.
Hababka ugu wanaagsan ee layskaga daaweynkaro
80-90%, dhalinyartu way ka daawoodaan/caafimaadaan xanuunkan kadib markuu haleelo, taas waxey astaan muuqata u leedahey in dhalinyarta haatan uu heysto xanuunkan ay iska daaweyn-karaan, hadey si wanaagsan u raacaan tabaha iyo xeeladaha leyskaga daweynkaro xanuunka faraha-baas ku haya dhalinta qarniga 21aad (better control thrapy), hadaba, kuwani waa hababka leyskaga daaweynkaro:……..
	Qodobka ugu horeya: Waxaad ugu horeyn joojisaa cabida sigaarka, cunista qaadka, iyo drugs-ka kale, hadii aad balwad leedahey way kuug adagtahey inaad halmar joojiso, laakiin waa inaad wakhti siiso, maskaxda iyo nafsadana aad ka dhaadhiciso joojinta balwadani iney caafimaad u leedahay, waxaad badsataa cabida biyaha macaan (mineral water), iskuna day inaad 5litir cabto maalintii, gaar ahaan xilliyada aad hurdada kazoo kacdo, iyo xilliyada aad shaqada adag qabato.
	Qodobka ku xigga: Hadii ay da’daadu u dhaxeyso sanadaha 18-35 waxaad ogaataa biyaha-baxa hore inuu yahey wax caadiya oo dhibaato buuran laheyn, waxaad isku daydaa inaad maskaxdaada ka saarto inaad biyo-baxeyso wakhtiga aad galmada ku jirto, adigoo fikirkaaga geenaya meelwalba si aay kaaga raagaan, dhalinyarta da’daas jira iney marka hore biya-baxaan, waxaa sabab u ah guurka oo u cusub, iyo iyagoo baahi weyn oo dhameystiran u qaba galmada, taasoona maskaxdu ay mashquul ku noqoneyso, dhiiguna deg-deg u shaqeynayo.
	Qodobka ku xigga: Calooshaad oo buuxda, ama cunto aad cuntay, waxey iyaduna sababtaa in jidhkaagu adkeysin iyo xamilaad yeelan-waayo, daal farabadana kuugu dhaco, biyuhuna si deg-deg kujiro u soo boodaa, hadaba iska ilaali inaad xaaskaaga u galmooto xilli calooshaadu ay dheregsantahey (sex on full stomach results premature ejaculation), hadaba waxaa haboon 3 saacood kadib markaad wax cunto, inaad xaaskaaga la ciyaarto.
	Qodobka ku xigga: Xilliga aad ku jirto galmada, waxaa jidhkaaga ka dhigtaa mid degan oo nabadeysan, waxad adeegsataa inaad neefta marna qaadato marna iska saarto (breath in-breath out)
	Qodobka kuxigga; Isku day inaad xaaskaaga ku tiraahdo erayo ay kamid yihin jooji, xaji, wad, cabaar u kaadi, iyo kushub: erayadan dhamantood waxey kusiinayaan dareen gaara, dhiirigalin, iyo guul nafsiyadeedba (stop it, hold it), tani waxey qeyb wayn ka tahey barashada galmada, iyo habka saaxiibtinimada, u sheeg xaaskaaga markaad soo dhowdahey si aysan kuugu sheegin inaad biyo-baxdo. 	Qodobka kuxigga: Ragga badankooda waxaa suurtagal ah iney ku fiicanyihiin wareega labaad (second round), fadlan hadaad tahey qof biyuhu horey uuga imaanyaan, isku day inaad marlabaad xaaskaaga ku noqoto, adigoo inta wakhtiga u dhaxeysana habab kala duwan ku maaweelinaya xaaskaaga, wareega labaad waa ka fiicanyahey wareega kowaad, markaa isku day inaad marlabaad booqato xaaskaaga, si dareenkeedu u buuxsamo.
	Qodobka ku xigga: Fadlan jooji daawashada filimaanta xun-xun, sawirada xun-xun, qoraalada xun-xun, dhegaysiga iyo muuqaalka aan niyada iyo jidhka u fiicneyn, dhammaantood waxey saameyn awoodleh oo muuqata ku leeyihiin dareenkaaga shahwada iyo raganimada, ilaahey ka baq, markastana ahow mid ka fogaada sinada, istiiinka ama salaaxista dumarka, iyo daawashada waxyaalaha aan akhlaaqiyaadka iyo anshaxa ku habooneyn.
	Qodobka ku xigga: Boqoo dhakhaatiirta aqoonta durugsan u leh cudurkan, iyo cusbitaalada, waxaad kaloo booqata shifooyinka diinta islaamka la iskugu daweeyo, waxaadna ka helaysaa daawooyin dhireed ku haboon islamarkaana daaweynkara xanuunkan, ahow mid rajo leh, oo si fiican iskaga daaweyn kara mowduucan.
waxaa kaloo jira bamaato kabuubiso (Lidocaine) ah oo la marsado taasoo keento in dareenka uu yaraado sidaasne ay ku dheeraato muddada.F.G: waxaa dhici karo inaad aragtid ama maqashid daawooyin iyo waxyaabo kale oo tira badan oo la xayaysiinayo oo la leeyahay waxaa lagu daaweeyaa xaladaan iyo wixii la mid ah ee adigoo la tashan takhtar aqoon u leh xaaladaada, ha isticmaalin maxaa yeelay waxay keeni karaan dhibatooyin hor leh. Waxaa kaloo muhiim ah in xaaladdaan laga sooco kacsi la'aanta oo ah iyadane mushkilad kale oo keento hawlgabka galmada.
Waxaa la joogaa wakhtigii si dhaba loogu dhiirri gelin lahaa naflayda abuuran in ay ka hadli karaan arrimaha nafahooda guud iyo gaar ahaaneed khuseeya; haddii cabsi ama ceeb wax lagu sheegay jiri jireen, xaqiiqdii, xilligani waa ka geddisan yahay xilliyadii hore, aqoon tii iyo garashadii way siyaadey. Haa, waa xilligii lala dagaalami lahaa khuraafaad ka kala geddisan ee maan ka dhallinyarada laga buuxiyey, marka wax aan ceeb ahayn oo diin tu ay ku sheegin laga dhigayo ceeb, miyey san khuraafaad ahayn? Marka cabsi aad u badan ay kaa hayso ka hadal ka wax diinta dhibaato aan ku ahayn, sow khuraafaad iska cad oo aan qarsoonayn maahan?
Dhaqan keenna (Dhaqan ka Soomaalida) wax badan oo wanaagsan oo diinta aan ka hor imaanayn wuu leeyahay, wax kale oo xun oo khuraafaad iyo khuzacbalaat ah waa leeyahay. Haa, waxey nu joognaa marxaladdii maskaxdeennu shaqayn lahayd oo ay kala saari lahayd, dhaqan keenna intiisa wanaagsan iyo intiisa xun, miisaan kuna aragtida nin ka cad maahee, waa diinta xumaha ka hufan (Shareecada Islaamka)
-	Qof walba oo ka cabsoonaya, moodayana ceeb, ka hadal ka wax diinta aysan u arkin dhibaato, waa inuu ogaadaa isagu inuu gun yahay oo gardarrada wado.
Waxaad arki kartaa dhibane xanuunsan oo la itaal daran cudur daawo leh, wuxuu ka baqayaa inuu cusbitaal tago oo u sheego inuu TB qabo, maxaad u cabsoonaysaa? Hadii aad weydiiso, “Waxaan u arkaa ceeb, dad kaa ila yaabaya” ayuu kugu jalbeebayaa. Adoo isaga la yaabban baad arki mid kale oo xanuunsan oo diidan in dhakhtar u tago, wuxuu la wareersan yahay buufis iyo isla hadal,”Maxaad ugu tegi weyday” baad weydiisey, “Waan garanayaa inuu i dhahayo waad waalan tahay” ayuu kugu dhirbaaxayaa.
Is beddel ka waayaha nolol ee bulsho ee dunida, la yaab maleh duugoobida shay iyo cusayb ka shay. Sideedaba, horumar walba oo aadanuhu gaadho leh dhib iyo dheef. Dunidan ka beddelan sanawaad hore sidey u dhigneyd, horumar ka tiknoloojiyadda dheef teeda kol ka la baal maro oo dhibaatadeeda loo tago, waxey noqotay saldhig leh awoodo iyo farsamooyin lagu baahin karo xume, nooc walba iyo tilmaan walba. Fursaddaas waxaa ka faa’ideys tay xume-wade walba, diin tuu doono iyo dhaqan kuu doono ha haystee. 40 sanno ka hor iyo ka dib, is beddel wayn oo dhinacyo badan taabanaya oo leh saamayn tiisa faa’iido iyo faa’iido darro ayay bulshadu la nooshahay. Waagii hore, doob ka waa lagu xisaab tami jirey, habluhuna way isugu faani jireen (Doob baa i qaba), xattaa Kuwa aan guursan waxey maan kooda gelin jireen riyo guur oo ku suntan doob u diyaara inuu is kala bixiyo soo dhoweyn tiisa. Haatan, waxaa ii muuqata aragtidaas iyo kuwo kale oo badan inay raaceen is beddeladii nolosha ee sanawaad kii hore. Doob ka maanta nool, waa mid ka liita awood iyo adkaysin ragganimo marka la barbar dhigo doob kii hore!!!
NB: qoraalkan xuquuqdiisa waxaa iska leh qoraaga, dib lama daabici karo, waxbana lagama badeli karo, lama faafin-karo, iyadoo aan qoraaga fasax looga heysan, laakiin waa la keydsan karaa.
Qoraha Maqalkaan Mohamud Ali Mohamud (Qanciye) German—Leverkusen Mohamud310@Gmail.com
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Biyo_baxa_deg_dega_ah&oldid=190029"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 15:24, 25 Jannaayo 2019.